छ वर्षीय बालक रायनको अरबै कमाइ कसरी? | Ekhabar Nepal
छ वर्षीय बालक रायनको अरबै कमाइ कसरी?
समाज मंसिर २७ २०७४ ekhabarnepal
मसिर २७ काठमाडौँ । एउटा ६ वर्षीय बालकले कति आम्दानी गर्छ ? तपाईं भन्नुहोला यस्तो सानो उमेर बच्चा काम गर्छ र ?तर, रायन हरेक हप्ता युट्युवमा खेलौनाको समीक्षा गर्छन् र यसको बदला उनले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।
रायनले अघिल्लो वर्ष ११ मिलियन अमेरिकी डलर कमाई गरेका थिए । जुन नेपाली रुपैयाँमा १ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ ।युट्युवमा रायनको भिडियो करोडौँले हेर्छन् । उनको रायन टोयजरिभ्यु नामको एउटा युट्युव च्यानल रहेको छ ।
यस युट्युव च्यानलमार्फत रायन आफ्ना भ्युअर्सहरुलाई खेलौनाको दुनियामा लैजान् । फोर्ब्स पत्रिकाले उनलाई सन् २०१७ मा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने स्टारको सूचीमा राखेको छ ।सन् २०१५ को मार्चमा शुरु गरिएको रायन टोयजरिभ्युका भिडियोहरु १६ अर्बभन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ ।यति चर्चित भए पनि रायनको बारेमा धेरै जानकारी कसैलाई थाहा छैन । उनको पूरा नाम के हो ? कहाँ बस्छन् ? भन्ने थोरैलाई मात्र थाहा छ । मात्र यति थाहा छ कि उनी अमेरिकी हुन् ।
हालै वासिङ्टन पोष्टमा रायनको आमाले दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘युट्युव च्यानलको सोच उनी तीन वर्षको उमेर हुँदा नै आएको थियो । रायन सानो उमेरदेखि नै खेलौनाको समीक्षा गर्ने टिभी च्यानलहरु खुब हेर्थे ।’रायनकी आमाले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा भनिन्, ‘एक दिन रायनले मलाई भन्यो कि किन ऊ अन्य बच्चाहरु जस्तो युट्युवमा छैन । त्यही बेला हामीलाई लाग्यो कि हामी पनि यो गर्न सक्छौँ । हामी तुरुन्तै खेलौनाको पसलमा गयौँ र एक लेगो ट्रेन किनेर त्यहाँबाट शुरु गर्यौँ ।रायनको एउटा भिडियो ८० करोडभन्दा धेरैले हेरेका छन् । मार्च, २०१५ बाट शुरु भएको च्यानलले सन् २०१६ को जनवरीसम्ममा १० लाखभन्दा धेरै सब्सक्राइबर्स पाइसकेको थियो । हाल रायनको च्यानलमा १ करोडभन्दा धेरै सब्सक्राइबर्स रहेका छन् ।